मास्क र स्यानिटाइजरको बढी प्रयोगले छालामा समस्या, कसरी गर्ने समाधान? - Mitho Khabar
June 20, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on मास्क र स्यानिटाइजरको बढी प्रयोगले छालामा समस्या, कसरी गर्ने समाधान?
तर, साबुन, ह्यान्ड वास र स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले ‘ह्यान्ड डर्माटाइटिस’ समस्या एकदमै बढी मात्रामा देखिने छाला तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डा.उमा क्याल बताउँछिन्।
‘यस्ता वस्तुको निरन्तर प्रयोगले सुरूमा हातको छाला सुख्खा र फुस्रो हुने, त्यसपछि छालामा चिराहरू परेर अति जटिल अवस्थामा पुग्छ,’ डा. क्यालले सेतोपाटीसँग भनिन्, ‘यी चिराले घाउको रूप लिएर निकै दुख्ने, पाक्ने अवस्थामा समेत पुगेको पाइएको छ।’
हातको यो समस्यालाई चिकित्सा भाषामा ‘इरिटेट कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस’ भनिन्छ।
‘हात धोएपछि सधैं ग्लिसिरिन, घ्यूकुमारी, वा युरिया मिसिएका क्रिमहरू लगाउने बानी गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘राति सुत्नुअघि भ्यास्लिन, पेट्रोलियम जेली हातमा लगाएर सुत्यो भने ह्यान्ड डर्माटाइटिसबाट जोगिन सकिन्छ।’
यस्तैगरी लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा गालामा रातोरातो हुने र मुखको वरिपरि खटिरा, डन्डिफोर आउने समस्या बढ्दो क्रममा देखापरेको डा.क्यालले बताइन्। मास्कको कारण आएका डन्डिफोरलाई ‘मास्कएक्ने’ भनिन्छ।
लामो समय मास्क लगाउँदा ‘रोज्याजिया र ‘पेरिओरल डर्माडाइटिस’ जस्ता समस्या बढेर गएको उनको अनुभव छ। रोज्याजिया र पेरिओरल डर्माडाइटिस गालामा रातो देखिनु र मुखको वरिपरि खटिरा आउनुलाई भनिन्छ।
यसकारण ‘डिस्पोजेबल मास्क’ एक दिनभन्दा बढी लगाउनु हुँदैन। कपडाको मास्क प्रत्येक दिन धुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘सावधानी अपनाउँदा समेत समस्या बढ्दै गएमा छालाका चिकित्सकसँग तुरुन्तै परमर्श लिनुपर्छ।’
‘त्यसका लागि अनुहारमा लगाउनुपर्ने अति आवश्यक सामग्रीः फेसवास, मोस्चराइजिङ, सनस्क्रिन र नाइट क्रिम प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘दिनको दुईपटक मुख धोएर यी क्रिम लगाउन अति आवश्यक छ।’
जस्तैः सुख्खा छाला भए क्रिम, मिश्रित छालाका लागि लोसन र चिल्लो छालाका लागि जेल प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यसैगरी, चिल्लो छालामा ‘स्यालिसिलिक एसिड’वाला फेसवास प्रयोग गर्नु उचित हुने डा. क्याल बताउँछिन्।
‘मैले निःशुल्क अनलाइन कन्सल्टेसन मिलाएकी छु। अस्पतालमा सम्पर्क गरेर भर्चुअल ओपिडीका लागि अपोइन्टमेन्ट बुक गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो इन्स्टाग्राम, फेसबुक, भाइबर र ह्वाट्सएपमार्फत् सजिलै छालासम्बन्धी परामर्श लिन सकिन्छ।